That's so good, right?: The Birthday Present!
အလုပ်အကိုင်....ကျွန်တော့်အလုပ်အကိုင်က စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့အကူဝန်ထမ်းပါ။ ပစ္စည်းအိတ်တွေကို သူ့တို့ ကားတွေဆီ ကူသယ်ပေးရရင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ဈေးဝယ်များစွာကို တွေ့ရတာနေ့စဉ်။ အဲဒီထဲကမှ ကျွန်တော့်ထက် နည်းနည်းငယ်မယ့် ဇေဇေဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ခင်မင်ခဲ့ရတယ်။ သူ့အမေ ဈေးဝယ်လာတိုင်းပါပါလာ တတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်း မကြာခဏလာဝယ်တတ်တဲ့သူပါ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်လာကြတာပေါ့။ ကျွန်တော့်နားချိန် ဒါမှမဟုတ် ပြန်ချိန်မှာ အတူ လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီး လေညှင်းခံကြတာ။ တစ်နေ့အရောင်းခန်းမထဲဝင်ခဲ့တော့ သူဝင်လာတာ တွေ့ရပြီးပေါင်မုန့်တစ်လုံးလာဝယ်တာခါတိုင်းထက်ပျော်ရွှင်နေပုံပေါ်ပါရဲ့။သူ့အောက်ပိုင်းအချိုးအဆက်ပေါ်လွင်စေတဲ့
ပြိုင်ဘီးစီးသမားတွေဝတ်တဲ့ဘောင်းဘီတိုကိုဝတ်ထားတာ။ဘာကြောင့်အဲဒီလောက်ရွှင်မြူးနေရတာလဲ မေးကြည့်တော့ဒီနေ့သူ့၁၈နှစ်မြောက်မွေးနေ့မို့ဆိုပဲ။သူ့ကိုအနောက်ဘက်ကအခန်းထဲခဏလိုက်ခဲ့ပါလား မင်းဘောင်းဘီဆိုဒ်ကို သေချာသိချင်လို့မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင် ဆိုပြီး ဖိတ်ခေါ် ကြည့်လိုက်တယ်။ဇေဇေက လှည့်ပတ်တိမ်းရှောင်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ သူ့ လက်မောင်းကို သေချာညှပ်ကိုင်ပြီး ဆွဲခေါ်ခဲ့ရော။ တစ်ချိန်တည်းမှာသူ့ဘောင်းဘီကို ဆွဲပြီးခေါ်တာဆိုတော့ သူပါလာရတာပေါ့။ အစကဒီလို အတင်းအကြပ်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ် ပါဘူးလေ။ဇေဇေ့ကို အဲဒီ့ဘောင်းဘီကို ခဏချွတ်ကြည့်ဖို့ ကျွန်တော် ဘောင်းဘီအတိုင်း အတာကိုတိုင်းကြည့်ရအောင်ပေါ့လေ။ ပစ္စည်းတွေထားသိုရာ အနောက်ဘက်အခန်းကျယ် ရဲ့စက္ကူပုံးတွေ ပုံထပ်ထားရာနောက်မှာပေါ့။ သူ့ဘောင်းဘီကို အသာဆွဲချွတ် ကျွန်တော့် ကိုလှမ်းပေးတော့ မသိ မသာ တိုင်းတြာ့ည့်ရင်း သူ့ကိုခိုးကြည့်ရတာ ဘောင်းဘီဆိုဒ်နံပါတ်မပါဘူး ပြောရှာပါရဲ့။
ကျွန်တော်ဘောင်းဘီကို ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်နေတုန်း သူက briefs လေးနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှာရပ်နေတာ မိုးကာတဲကိုတုတ်နဲ့ထောက်ထားသလိုသူ့ပေါင်ကြားကဟာကြီးက တိုးထွက်လို့။ ကြည့်ရတာ ဘောင်းဘီဆိုဒ်က
၁၄၊၁၅နှစ်တွေအတွက် သင့်တော်မယ့်ဟာပဲ။ဒီဘောင်းဘီကိုဝတ်ရတာမင်းအနေရမခက်ဘူးလား လို့မေးလိုက် တော့ သူက 'ဟုတ်တယ်၊နည်းနည်းတော့ကြပ်တယ်'တဲ့။ ဘယ်သူ့မှ မရှိတဲ့နေရာသူနဲ့ကျွန်တော်ဘဲရှိနေချိန် သူ့ ဘောင်းဘီကို ကိုင်ထားတော့သူ့ကိုယ်နံ့လေးလဲရနေ၊ သူ့ပေါင်ကြားက ထောင်ထနေတာတွေကြည့်ပြီး
ကျွန်တော်လည်း ပါးခြုပ်ထဲကမြွေဟောက်က ခေါင်းထောင်ထနေပြီ။ ကိစ္စဆိုတာအစတုန်းကတော့ စိတ် ထဲမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘောင်းဘီထဲက ခပ်ကြီးကြီး အထုပ်အထည်ကကျွန်တော့်ကို turn – on ဖြစ်စေခဲ့တာအမှန်ပဲ။ သူနဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ခုခု လုပ်ပြတာကို ကြည့်ချင်တယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လိုပြောဆို ရပါ့မလဲ။
'ဇေဇေ မင်း ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီး စိတ်လာရင်ဘာလုပ်တတ်လဲ'
'ညီတစ်ယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီကိုချွတ် -ွင်းထုတာပေါ့ဗျ'
အဲဒါဆို မင်းထုတာကိုကြည့်ချင်လို့ အခုလုပ်ပြပါလားဆိုတော့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်ပြရင် လုပ်မယ်တဲ့။ ဂျင်းဝတ်ထားတဲ့ကျွန်တော့်ရှေ့ပိုင်းကို လှမ်းတို့ထိရင်းဆိုတယ်။ နောက်တော့ကျွန်တော့်ဂျင်းဘောင်းဘီက ကြယ်သီးတွေကိုတစ်လုံးခြင်းဖြုတ်တော့တာပဲ။
သူနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီး သူ့briefs ကိုကြမ်းပြင်ကို လျောချလိုက်တာထိပ်အရေပြားဖြတ်ထားတဲ့ သူ့ငပဲဟာ ဘွား ကနဲပဲ။ ရွှေဥတွေက softball တစ်ခုလိုခပ်ကြီးကြီး။ ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေ မပိတ်နိုင်တော့သလို ကျွန်တော့် ပါးစပ်တွေကလည်း တစ်ခုခုစားချင်လာသလို ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ငပဲကကျွန်တော့်အကြိုက်အတိုင်းအတာပါပဲ။ သိပ်မကြီးသလို သိပ်လည်းမသေးဘူး။ အဲဒါကို ထိချင်ကိုင်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်လန့်နေတာ အတော်ကြာ။ ဇေဇေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်။ သူ့လက်တွေဟာ ခပ်မြန်မြန်ပဲကျွန်တော့်Jeans ဘောင်းဘီထဲ လက်လျှိုကာအောက်ကို ဆွဲချလိုက်တယ်အောက်ခံဘောင်းဘီရောပေါ့။ သူ့လက်နုနုနဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲ ကိုဆွဲကိုင်ကာ ခဏလေး ညှစ်ပြုကြည့်ပြီးနောက် ရှေ့တိုးနှောက်ငှင်လုပ်ကြည့်တယ်။ သူ့ရဲ့ရဲတင်းမှု ကကျွန်တော့်အတွက်တော့ဝမ်းသာစရာ။
ရုတ်တရက် သူဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူရဲ့ပူနွေးနေတဲ့ အာခံတွင်းထဲ သွင်းလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာများလဲ တစ်ကိုယ်လုံးကိုရှိန်းကနဲဖြစ်သွားရတာ။ ဖီးလ်ယူလို့ကောင်းနေစဉ်ခဏ သူမတ်တပ်ရပ်လိုက်ကာကျွန်တော့်အလှည့်တဲ့။ ကျွန်တော့် ပခုံးပေါ်သူ့လက်အစုံကိုတင်ပြီးဒူးထောက် ထိုင်ဖို့ ဖိအားပေးရော။ မငြင်းချင် ငြင်းချင်နဲ့ဒူးထောက်လိုက်စဉ်မှာတော့ မိုးပေါ်ထောင်နေတဲ့ သူ့ငပဲဟာ ကျွန်တော့် မျက်နှာနဲ့ လက်မ၀က်လောက်သာ ဝေးတော့တာ။ သူ့ငပဲကိုအသာကိုင်ကြည့်ပြီး ငြိမ်နေမိကာ နောက်တော့ သူ့ထိပ်အရေပြားလေးကိုလျှာနဲ့အသာတို့၊ ပြီးတော့ ငပဲတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲသွင်းလိုက်တော့တာပါ။ ပါးစပ်ထဲအဆုံးထိထည့်လိုက်၊ အပြင်ပြန်ထုတ်လိုက်ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ပေးရင်း မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ သူက ပခုံးကိုကိုင်ပြီးသတိပေးတယ်။
'ရပ်လိုက်တော့ အစ်ကို၊ တော်ကြာပြီးသွားလိမ့်မယ် တစ်ယောက်ယောက် ၀င်လာရင် ကျွန်တော်တို့ကို မိသွားမှာ။'
'-ွင်းထုလိုက်ကြတာပဲကောင်းတယ်။ ညမှ အတူတူ အစစ်အမှန် ပျော်ကြတာပေါ့'
နှစ်ယောက်သား နံရံကိုမှီတစ်ယောက်ဟာတစ်ယောက်ကိုင်ပြီး ထုလိုက်ကြတာသင်္ကြန် ရေပြွတ်လို ပန်းထုတ်ကြပြီးသည်အထိ။ သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲတင်ပြီးဝတ်ကျွန်တော်လည်း ဂျင်းဘောင်းဘီကို နေသားတကျ ၀တ်အဆင်အပြီးမှာတော့နှစ်ယောက်သား အရောင်းခန်းမထဲ မသိမသာပြန်ဝင်လာကြပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ပြုံးပြကြရင်းပေ့ါ။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသား ဒီညအတွက် အစီအစဉ်တွေဆွဲလို့။ သူ့မိဘတွေ ရက်အနည်းငယ်လောက် ခရီးထွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်တွေ ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာပေါ့။ ဇေဇေသူဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေ ထည့်ထားတဲ့အထုပ်ကို သူ့ဘောင်းဘီရှေ့မှာ ကာရင်း
ကားလမ်းဖြတ်ကူးသွားတာကို ကျွန်တော်ကြည့်နေမိတယ်။ စတိုခန်းဘက်မှာ ဖြစ်ခဲ့ရတာတွေဟာ အိပ်မက်တစ်ခု ကို အကောင်အထည်နှင့်မြင်ခဲ့ရသလိုပဲရင်ထဲမြူးလို့။
အလုပ်ချိန်ပြီးတော့ အိမ်ကိုခဏပြန်၊ ထမင်းစားပြီး ရေမိုးချိုးကာ အ၀တ်အစား အလန်းစားကိုလဲလှယ်ကာ မွှေးကြိုင်စေရော တစ်ကိုယ်လုံး။ ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ရင်အုံထဲက နှလုံးသားဟာ ဇေဇေ့အိမ်က တံခါးဘဲလ်ကို နှိပ်မိချိန်ထိအခုန်မြန်နေရော။ ခပ်ဟဟပွင့်လာတဲ့ တံခါးကြားက ဖြူဝင်းနေတဲ့ဇေဇေ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ် တံခါးဘဲလ်သံအဆုံး။ အိမ်နေရင်း ဘောင်းဘီတိုအဖြူနှင့် စွပ်ကျယ် အနက်လေးနဲ့လေ။ သူဘာတွေများ လုပ်နေသည်မသိဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းဘီက ဖောင်းကားလို့ပါပဲ။ သူ့မျက်နှာမှာတော့အပြုံးချိုချိုက တွဲခိုလို့။
'ဟေး....ညီ့ကိုမွေးနေ့အထူးစပါယ်ရှယ်လက်ဆောင်လေးပေးမယ်မဟုတ်လား' ပါးစပ်ကလည်းပြော ကျွန်တော့် လက်ကိုလည်းအသာဆွဲကိုင်ကာ သူ့အိပ်ခန်းဆီဆွဲခေါ်သွားပါတော့တယ်။ အခန်းတံခါးလည်းပိတ် ကျွန်တော် တို့အ၀တ်တွေဟာလည်း လေထဲလွင့်ပျံလို့။အိပ်ယာပေါ်မှာ နှစ်ယောက်သားဘေးခြင်းယှဉ်အိပ်ကာ တစ်ယောက် ငပဲကိုတစ်ယောက်ကိုင်ကာ ဗုံတီးကြပါတယ်။ ဇေဇေက ကျွန်တော်တစ်ခုခုများလုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်ပိုပြီးပျော်ဖို့ ကောင်းမှာပဲတဲ့။ ကျွန်တော်က ဘာလည်း ဆိုတော့ သူ့ခရေပွင့်ထဲ ကျွန်တော့်ဟာကို အထုတ်အသွင်းလုပ်ရင် ပေါ့ဆိုပြီး အဖြေပေးပါတယ်။ ဇေဇေ အိပ်ယာပေါ်ကိုကျောခင်း၊ ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ကျွန်တော့်ပခုံးပေါ် တင်လိုက်ကာ သူ့ခြေတွေကြားထဲဝင်ရပ်ဖို့ပြောတော့ အရင်ဆုံး ကျွန်တော်အနေအထားပြင်လိုက်ကာ သူ့ခရေ ပေါက်ထဲတံတွေးများများထည့်လိုက်တယ်။ ဖြည်းဖြည်းလေးအရင်ထည့်နော် ဆိုတော့လည်း ကျွန်တော်က ခပ်သာသာလေး တထစ်ခြင်း တစ်ရစ်ခြင်းသွင်းတာမှာ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး သူ့ပေါ်မှောက်ရက်လဲကျသွားကာ တစ်ချောင်းလုံးမြုပ်သွားပါရော။ ခဏငြိမ်နေပြီးနောက်တော့ အထုတ်အသွင်း စလုပ်ကြည့်တာ အတော်ကျပ် တာပါပဲ။ ပုံမှန်လေးလုပ်နေပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဆောင့်ပါဆိုလာတာကြောင့် အင်ဂျင်တပ်ထားသည့်အလား ကျွန်တော့်ခါးကိုမောင်းပစ်လိုက်တာဗျာ ခုတင်ကိုရမ်းခါနေရော။
ကျွန်တော့်ငပဲကို ပူနွေးသန်မာတဲ့ကြွက်သားများက တင်းကြပ်နေအောင်ညှပ်ထားတာဆိုတော့ လုပ်နေတာကိုရပ် မပစ်ချင်လောက်အောင်ခံစားရတယ်။ ဒီအချိန်တစ်ယောက်ယောက်လာရင်လည်း ကျွန်တော့်ဆောင့်ချက်တွေကို ရပ်မပစ်နိုင်တော့ဘူး။ သူ့ရင်ဘတ်က နီရဲနေတဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေို့ အသာငုံ့ကိုင်းရင်းလျှာနဲ့ကလိမိသလို သူ့နှုတ်ခမ်းအစုံကိုလည်း တက်မက်စွာနမ်းရှိုက်မိရပါတယ် သူ့ခရေကိုလုပ်နေစဉ်မှာ။ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးသလို လုပ်နေစဉ်မှာ ပါတနာရဲ့ မျက်နှာကိုမကြည့်နဲ့ဆိုတာ တကယ်မှန်တယ်။ မှေးမှိတ်နေတဲ့သူ့မျက်ဝန်း၊ခပ်ဟဟဖြစ် နေတဲ့သူ့နှုတ်ခမ်း၊ကြားရတဲ့အသံသဲ့သဲ့တို့ကြောင့် တစ်ချက်သွင်းပြီးပြန်အထုတ်မှာ ဘယ်လိုမှ မတားနိုင်စွာ သူ့ ရင်ဘတ်တွေ ဗိုက်သားတွေပေါ် ဖြူပျစ်ပျစ်တွေ စိုရွှဲကုန်ပါရော။ အိုး.....သူ့မေးပေါ်မှာ စင်ထားတဲ့ အရည်တစ်ချို့ ကိုလျှာနဲ့တို့ပြီး အရသာခံနေသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ပါးပြင်ကို တစ်ချက်နမ်းကာ အိပ်ယာပေါ်လှဲ လျောင်းလိုက်ရင်း အနားယူရတာပေါ့။
နှစ်ဦးသားနှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်သွားစဉ်မှာ ဖုန်းသံကြောင့်နိုးလာရပါတယ်။ သူ့အမေကခေါ်တာလေ။ နက်ဖြန်ည တောင် ပြန်မလာနိုင်သေးဘူးတဲ့ အိမ်ရဲ့မလှမ်းမကမ်းက ထမင်းဆိုင်က ဟင်းမှာစားဆိုတဲ့အကြောင်းတွေလှမ်း ပြောတာ။ ဇေဇေက အရမ်းအိပ်ချင်နေလားတဲ့ မေးဖော်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ဘာပြောနိုင်မှာလဲ? အဲဒီညက ကျွန်တော်တို့ အိပ်လိုက် နိုင်းလာရင် စုပ်ကြ မှုတ်ကြ၊ အိပ်လိုက် နိုးလာရင် စုပ်ကြမှုတ်ကြနှင့် နောက်ဆုံးFuck ကြပေါ့။ အတော်ကောင်းတဲ့ ညဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ မနက်ခင်းကြတော့လည်း စနေဆိုတော့ အလုပ်သွားဖို့ မပူရ အိမ်ပြန်ပြီး ကျွန်တော်နားရုံပါပဲ။ လိုလည်း လိုအပ်နေပါပြီး အိပ်စက်အနားယူဖို့ ကျွန်တော့်အတွက်လေ။
ဇေဇေနှင့် ကျွန်တော် မကြုံဖူးတဲ့ အရသာထူးတွေရရှိသွားကြပြီးနောက် မကြာခဏ ထဲထဲဝင်ဝင် ခံစားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ fuckbuddy တွေဖြစ်လာကြပြီပေါ့။ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ အဆုံးသတ်တွေမှာဆိုရင် ကျွန်တော့်အိမ် ဒါမှမဟုတ် သူ့ အိမ်မှာ ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ကို မကြာခဏလာနေတာမှာ တစ်ခါတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်မှာအရောင်း ၀န်ထမ်းအကူ တစ်ယောက်လိုတာနှင့်ကြုံတော့ သူအချိန်ပိုင်းအဖြစ်ဝင်လုပ်ပါတော့တယ်။
အဲဒါမိုက်တယ်။ အလုပ်အတူတူမဟုတ်ပေမဲ့ အလုပ်နားချိန်မှာ အတူတူတွေ့ရနားရတာဆိုတော့ ပျော်ဖို့အလွန် ကောင်းပေါ့။ တစ်ခါတလေ ၁၅မိနစ်နားချိန်ဟာ ကျွန်တော်တို့ စုပ်ချိန်မှုတ်ချိန်အတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆိုင်ပိတ်ရက် စနေ တနင်္ဂနွေတွေမှာ ကောင်းကောင်းလုပ်ဖြစ်ကြတာလေ။ တစ်ည ကျွန်တော်တို့ အတူတူရှိနေချိန်မှာ ဇေဇေကပြောတယ် သူ ဒီဗီဒီစက်အသစ်ဝယ်ဖို့ ဒီအလုပ်လုပ်ပြီး ငွေစုနေတာတဲ့။ ပြည့်ဖို့ နည်းနည်းပဲလိုတော့တာတဲ့လေ။ အဲဒီငွေပမာဏလောက်ကို အချိန်ပိုင်းအတွင်း ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်း ငါသိတယ် လို့ပြောလိုက်တော့ အိပ်ယာပေါ်လှဲနေရာကနေ ထထိုင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလည်းမေးတော့တယ်။ သူ့ကိုပြော ပြရတာပေါ့ ကျွန်တော်ငွေလိုနေတဲ့အချိန် ပိုက်ဆံအမြဲပေးနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း။ သူက နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက်၊ သူ့ရှေ့မှာ ကောင်ကလေးတွေ လိင်ဆက်ဆံပြတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုလုပ်ပြဖျော်ဖြေပေးရင် tips money များများ ပေးတတ်တယ်ဆိုတာ။ ဇေဇေက အစကရှက်နေသေးတာ။ ကိုယ်တွေလုပ်တာကို တစ်ခြားသူ ကြည့်နေမှာဆို တော့။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ သူက ငါတို့လုပ်တာကိုကြည့်ပြီး သူ့ဖာသာ -ွင်းထုနေမှာပါလို့ပြောပြရတာပေါ့။ အဲဒီနောက် မှာတော့ စီစဉ်စရာရှိတာတွေ စီစဉ်ရပါတယ် နိုင်ငံခြားသားဆီ ဖုန်းဆက်ရတာတို့ ဘာတို့။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေတာကတော့ စနေနေ့ညနေပိုင်းမှာ 'အိုကေ' တဲ့။ သူ့အိမ်ခန်းကို ကျွန်တော်တို့သွား ရမှာလေ။ နေ၀င်သွားချိန် ကျွန်တော်တို့ သန့်စင်ရေမိုးချိုးပြီးနောက် Taxiငှားကာ နိုင်ငံခြားသားရဲ့အိမ်ကိုသွား ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူက အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ အတော်ချစ်တတ်တာ။ လိပ်ကလေးတွေတောင်မွေးထား တတ်သေး။ တံခါးဘဲလ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့ ထွက်လာတဲ့ အဲဒီဘဲကြီးက ဘောင်းဘီတို စွပ်ကျယ်နဲ့ထွက်လာတယ်။ ဘောလုံးသမား ရွန်းနီနဲ့တောင်တူသေးတော့တာ။ ဖြူစင်ပြီး အချိုးအဆစ်ပြေပစ်တဲ့ ဇေဇေ့တစ်ကိုယ်လုံး ကိုကြည့်ပြီး'very nice' တဲ့။ ဆိုဖာပေါ် ခဏထိုင်ပြီး ဟိုဟိုသည်သည်ပြောဆိုကြရင်း မီးတွေထပိတ် Dim Light လေးထွန်းကာ ကျွန်တော် တို့ စတင်လှုပ်ရှားကြတော့ သူကြည့်ချင်ပါပြီဆိုပဲ။ ဦးဆုံး ဇေဇေက ကျွန်တော့် ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်က အ၀တ်တွေ ဖယ်ရှားပေးလိုက်ပါဆိုတော့ ဇေဇေက ကျွန်တော့်အ၀တ်တွေကို ခပ်ဖြည်းဖြည်းချွတ်ပေးတယ်။ သူ့အလှည့်မှာ တော့ ကျွန်တော်က ကြယ်သီးတစ်လုံးဖြုတ်တိုင်း လစ်လပ်သွားတဲ့ ကိုယ်အစိတ်အပိုင်းဟူသမျှ အနမ်းဖွဖွပေးရင်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဇေဇေ့အောက်ခံဘောင်းဘီကို ချွတ်ဖို့ပြင်တော့ အိပ်ယာပေါ်မှာထိုင်ဖို့ ညွှန်ကြားခံရတာနဲက အသာထိုင်ချလိုက်တာ ကျွန်တော်လည်း အလိုက်အထိုက် ချွတ်ပေးလိုက်တော့ ပေါင်ကြားက ငပဲက မိုးထောင် နေပါပြီ။ အဲဒီအချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသားက ကျွန်တော်တို့ဆီလှမ်းလာကာ ဇေဇေရဲ့ ငပဲကို အသာပွတ်သပ်ကြည့် တယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ယာပေါ်လှဲလိုက်ကာ ကျွန်တော့်အသည်းဇေဇေရဲ့ ခရေတွင်းဝကိုလျှာကျွေးမိတော့တာ။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်လုပ်နိုင်နေပေမယ့် ဇေဇေက ရှက်နေသလို မ၀ံ့မရဲနဲ့ လေ။
နှင်းဆီနုရောင် အသားချောင်းကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲအသာငုံပြီး စုပ်ယူလိုက်သလို ဇေဇေကလည်းထို့အတူပေါ့။ အဆုံးထိထည့်ထည့်လိုက်တဲ့ အပြုအမူ၊ ဇေဇေရဲ့ ခပ်သွက်သွက် အစုပ်အမှုတ်တွေဟာ ဟိုလူ့အတွက် အသည်း ခိုက်စေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိတယ်။ သူကျွန်တော်တို့ကို တစ်ချက်မှ လာမထိဘူး။ဇေဇေကျွန်တော့်ဟာကို စုပ်နေချိန်မှာ သူကဇေဇေ့ခရေပေါက်ကို လေနဲ့အသာမှုတ်ပေးနေတယ်။ အဲဒီ့ဖီးလ်က အတော်စိတ်ထန်စေသ လားမသိ။ နှစ်ဦးသားအရှိန်ရပြီး ညည်းညူသံတွေထွက်လာမိချိန်မှာ သူဆိုဖာမှာပြန်ထိုင်ပြီး ခပ်သွက်သွက် -ွင်း ထုလေရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်ပါးစပ်ထဲ တစ်ယောက် လျှံကြလာအောင် ပန်းထုတ်ပြီးကြချိန်မှာတော့ သူလည်း သူ့ဗိုက်သားတွေပေါ် ကော့ပြီး ပန်းသလားမသိ ရွှဲနေပြီးပြီ။
ကျွန်တော်နှင့် ဇေဇေ ခဏနားကြပြီးနောက် ဟိုလူယူလာပေးတဲ့ တဘက်အစိုနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြကာ အ၀တ် တွေပြန်ဝတ်ဖြစ်ကြတယ်။ သူ့အိမ်ကနေ ကျွန်တော်တို့ မထွက်ခွာခင်မှာ လက်တွေထဲ ပိုက်ဆံ အတော်များများ ရောက်လာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နောက်တစ်ကြိမ်လာဖြစ်တော့မလားမသိ။ နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေကို နောက်တစ်ခါ ကျရင် ဆက်သွယ်ဖို့ အချိန်နဲ့နေရာတွေပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အခုမှ။ ကျွန်တော်တို့ အရောက်လာ မယ်ပေါ့လေ။
နှစ်ဦးသားလမ်းလျှောက်ပြီး ပြန်လာချိန်မှာ ဇေဇေ့ကို မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြမိတယ် စိတ်ထဲမြူးကြွနေမှုနဲ့အတူ။ သူလိုတာအိုကေပြီမဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဇေဇေ့စိတ်ထဲ တစ်ခုခုအတွေးဝင်နေသလားမသိ စကားမဆိုဘူး။ ငါတို့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲသဘောထားဖို့ ပြေရာပြေကြောင်းပြောဖြစ်တော့ 'ဟုတ်ပါတယ် ဒီဗီဒီစက် အသစ်လို ပစ္စည်းမျိုးအသစ်တွေဝယ်ဖို့ List ပြုစုလို့ရတာပေါ့လေ' လို့ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကိုစိုက်ကြည့်ပြီး ပြောပါရဲ့ မပွင့်တပွင့်။
နောက်နေ့ဇေဇေ အလုပ်မလာတော့ဘူး။ သူ့အိမ်ကိုဖုန်းဆက်တော့ သူ့အဘိုးတွေအိမ် အလည်သွားနေတာတဲ့။ အလုပ်က လာတော့မှာမဟုတ်တဲ့။ ဇေဇေရယ်.....ဘယ်လိုများလဲ ကိုယ့်ကို ဘယ်လိုများထင်သွား?
'ဒါဆိုမင်းပြန်လာတော့မယ်ပေါ့.....ဟုတ်လား ငါပျော်သွားပြီကွာ မင်းကိုလွမ်းနေတာ'
ဟုတ်တယ် သူ့ကိုလွမ်းနေခဲ့တာ အပိုမဟုတ် တကယ့်ကိုလွမ်းနေခဲ့တာ..ပါ။
Alex Aung (29.3.10)
Posted by Alex Aung at 8:49 PM